नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराको सभापतिमा भट्टको आधिकारिक उम्मेदवारी - Unity Khabar
नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराको सभापतिमा भट्टको आधिकारिक उम्मेदवारी
‘निर्वाचन पैसाले नभएर विवेकले जितिन्छ’
✍️ शेर भण्डारी	 प्रकाशित मिति : ६ श्रावण २०७८, बुधबार १७:४४
डडेल्धुराः नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराको सभापतिमा हरिप्रसाद भट्टले आधिकारिक उम्मेदवारीको घोषणा गरेका छन् ।
बुधबार प्रेस युनियन डडेल्धुराले गरेको पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममा भट्टले पार्टीको सातौं अधिवेशनमा जिल्ला सभापतिका लागि उम्मेदवारीको घोषणा गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि एवं अधिवक्ता भट्टले जिल्लामा रहेको पार्टीको गुटलाई एकताका साथै आगामी हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसलाई विजयी गराउनका लागि उम्मेदवारी दिएको बताएका छन् ।
‘३१ वर्ष अगाडि नै शेरबहादुर देउवाले तिमीलाई नेता बनाउँछु भन्नुभएको थियो। त्यसैले मैले सभापतिमा उम्मेदवारी दिएको छु,’ उनले भने, ‘मलाई उहाँले पूर्णरूपमा समर्थन गर्नुहुन्छ। उहाँले कदापी कसैलाई तोकेर सभापति बन भन्न सक्दैनन् । हामी सबैले मिलेर अगाडि बढेको उहाँले पनि हेर्न चाहनुहुन्छ ।’
कुनै व्यक्तिले बालुवाटारबाट आफूलाई सभापतिको लागि देउवाले समर्थन गरेको भनेर गलत प्रचार गरिरहेको उनले भनाइ छ । उनले आफ्नो उम्मेदवारी कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने समेत बताएका छन् ।
सभापतिको उम्मेदवारी फिर्ता गरे न्यायाधीशको अफर आउँदा के हुन्छ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले भने, ‘न्यायाधीश मात्रै होइन मन्त्रीको अफर आउँदा पनि उम्मेदवारी फिर्ता हुँदैन ।’
डडेल्धुरा कांग्रेसलाई एक ढिक्का भएर अगाडी बढाउने उदेश्यले उनले १० बुँदे घोषणा पत्रसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । विद्यार्थीकालदेखि नै देउवाले तिमीलाई नेता बनाउँछु भनेकोले उनकै प्रेरणाले राजनीतिमा सक्रिय भएको स्मरण गर्दै उनले आफूलाई देउवाले सहयोग गर्नेसमेत दाबी गरेका छन्।
केन्द्रमा पार्टी सभापति देउवालाई सहयोग गर्नेसमेत उनले बताएका छन् । उनले निर्वाचन पैसाले नभएर विवेक र वुद्धिले जितिने बताएका छन् । वर्तमान सभापति कर्ण मल्लको समर्थन र कांग्रेस कार्यकर्ताको सहयोग आफ्नो लागि अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।
यसअघि परशुराम नगरपालिकाका नगरप्रमुख भीमबहादुर साउँदले पनि जिल्ला सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् । देउवाले आफूलाई समर्थन गरेको भन्दै साउँदले सभापतिमा उम्मेदवारी दिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
वर्तमान उपसभापति करुणाकर भट्ट, गन्यापधुरा गाउँपालिका अध्यक्ष नवलबहादुर मल्ल, महासमिति सदस्य तारक बुढाऐर, नेपाल दलित संघको संस्थापक भरत नेपाली र युवा नेता चुडामणी ठकुराठीले पनि जिल्ला सभापति पनि सभापतिको आकांक्षी रहेका छन् ।
तर, अहिलेसम्म भट्ट र साउँदले मात्रै आधिकारकि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । उपसभापति भट्टले पनि सभापतिका लागि चुनावी प्रचारप्रसारलाई भने तीव्र बनाएका छन् ।
को हुन् सभापतिका उम्मेदवार भट्ट?
हरिप्रसाद भट्ट पेशाले अधिवक्ता हुन्। २०३७ सालको जनमत संग्रहबाटै उनको नेपाली काँग्रेस तिर झुकाव थियो। जनमत संग्रहको समयमा बहुदल पक्षका राम्रो पोष्टर देखेर पोष्टरहरू भित्तामा चिप्काएका दिन अझै उनको मानसपटलमा जिवित छ।
ती पोष्टर चिप्काउँदा उनी ११ वर्षका थिए। र, सोही समयमा उनलाई नेता भनेर बोलाइन्थ्यो। २०४७ सालमा भट्ट बैतडीको पाटन क्याम्पसमा आई.एल पढ्दा नेविसंघ क्याम्पस इकाईको अध्यक्ष भए।
उनले प्रजतन्त्रको लागि कठोर संघर्षसमेत गरे। सुदूरपश्चिममा सर्वाधिक लोकप्रिय नेता देउवा २०४७ सालमा पाटन एअरपोर्टमा आउँदा उनले स्वागत भाषण गरेका थिए। स्वागत भाषण गरिसके पश्चात राती विज्ञान परियोजनाको घरमा बोलाई देउवाले उनको तारिफ गरे।
‘राम्रो भाषण गर्ने रहेछौं। अब तिमीले मसँग डडेल्धुरा भरि घुम्नु पर्छ। तिमी राम्रो नेता बन्छौं। म संक्षण गर्छु,’ देउवाले भट्टलाई भने।
उनी २०५३ मा क्षेत्रिय प्रतिनिधि, २०५७ मा अमरगढी नगरसभापति, ३ पटक २०६२, ०६७ र ७२ मा लोकप्रिय मत ल्याएर महाधिवेशन महासिमितमा विजयी भएँ।
साथीहरूले जिम्मेवारी दिइसकेपछि देउवा केन्द्रीय सभापतिका उम्मेदवार भएपछि उनी २०६७ र २०७२ मा निर्वाचमा प्रतिनिधि (एजेन्ट) भए।